Vidio ny YouTube Views - YTpals
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fividianana fomba fijery YouTube?
Mamporisika ny olona hijery ny horonan-tsarinao
Ny fanampiana dia manampy amin'ny fampitomboana ny laharan'ny milina fikarohana
100% fandefasana azo antoka na ny volanao
100% Azo antoka ny famoahana horonantsary raha be sandry
Izahay dia mamonjy bebe kokoa noho ny baikonao!
Hanomboka ny valiny afaka 24-72 ora
Fijery misaraka manerana ny horonan-tsary marobe (Views 1,000 isaky ny horonan-tsary farafahakeliny). Manafatra 10,000 Views sy Split manerana ny sary 1 ka hatramin'ny 10.
Fomba voaporofo hividianana YouTube Views amin'ny 2022
YouTube dia tranonkala fampitana an-tserasera malaza be izay ahitana mpampiasa maherin'ny arivo tapitrisa mampakatra votoaty ora an-tapitrisany isan'andro. Avy amin'ny votoaty famoronana, fampianarana, horonan-tsarimihetsika, 'fomba fitarihana,' hevitra momba ny vokatra mankany amin'ny horonan-tsary tsy misy boaty, YouTube dia manana votoaty mahavariana izay tian'ny olona.
Io no sehatra tsara indrindra hanehoana ny talentanao, hanaparitahana ny fanentanana, hampisy fiantraikany na hampiroboroboana ny marikao. Ankoatra ny maha-tranonkala fandefasana votoaty ambony indrindra, YouTube dia fantsona tiana ho an'ny orinasa sy ho an'ireo mitady vola. Miankina amin'ny metrika toy ny isan'ny fijery, ny tia, ary ny mpanjifa anananao, dia afaka mamorona renivola ianao. Ny tombontsoa maro amin'ny maha YouTuber malaza no antony hividianan'ny olona ny fijerena YouTube.
Raha mikasa ny hanomboka ny fantsona YouTube ianao amin'ny 2022, ny fividianana fomba fijery dia hanampy anao hanafaingana ny dianao ho lasa YouTuber mahomby. Raha ny momba ny fividianana fijerena YouTube dia tsy mitovy daholo ny tranokala na mpivarotra. Ny fahafantarana ny fomba hividianana fomba fijery manome ny vokatra tadiavinao dia tena ilaina amin'ny fanatanterahana ny paikadinao YouTube 2022.
Inona no atao hoe fijerena YouTube?
Alohan'ny hitadiavanao ny tranokala tsara indrindra mividy ny fahitana YouTube, zava-dehibe ny fahatakarana ny atao hoe fomba fijery. YouTube dia manisa mpijery arakaraka ireto fepetra ireto:
Niniana nikitika ilay horonan-tsary ilay mpampiasa mba hijery ilay horonan-tsary.
Ny mpampiasa dia mijery ny horonan-tsary mandritra ny 30 segondra farafahakeliny.
Ny fijerinao manokana dia isaina rehefa milalao ny horonan-tsarinao YouTube ianao, raha tsy mijery azy indray mandeha na indroa ianao. Ny famelombelomana tsy tapaka ny pejy hanamafisana ny fomba fijery dia tsy raisina ho toy ny fijerena.
Hiisa fijerena ihany koa ny YouTube raha mandany 30 segondra mahery mijery ilay horonan-tsary ianao nefa mitsambikina. Ny fijerena ilay horonan-tsary mandritra ny 30 segondra latsaka dia tsy raisina ho toy ny fijerena YouTube. Zava-dehibe ny fetran'ny fiambenana 30 segondra satria manampy ny sehatra hamaritana raha azo atao vola ilay video. Ny horonan-tsary latsaky ny 30 segondra matetika dia tsy azo atao vola.
Miaraka amin'ny fomba fijery tsy miavaka, izay fiverenana mitsidika sy famerenana dia isaina ho toy ny fijery ihany koa. Ny dashboard analyse YouTube dia mampiseho mpijery tsy manam-paharoa raha te hahafantatra an'io metrika io ianao.
Ny fijery miverimberina avy amin'ny hafa dia horaisina ho toy ny fomba fijery ihany. Tsy mamaritra ny tokonam-baravarana hampitsahatra ny fanisana ny fijerena ny YouTube. Mino ny manam-pahaizana YouTube fa manisa hatramin'ny efatra na dimy isan'andro ny sehatra saingy mijanona ny fanavaozana ny isan'ny fijerena aorian'io isa io. Na dia mahazatra aza ny mieritreritra fa ny fampitandremana ny mpikambana ao amin'ny ekipa, ny namana, na ny fianakaviana hijery ireo horonan-tsary imbetsaka dia hampitombo ny fijery, dia mety tsy hitranga izany.
Raha 'zava-boahary' ny fomba fijery, dia hitan'ny logiciel YouTube izy ireo ary mamafa azy ireo. Ireto ny famantarana famantarana ny olana ho an'ny YouTube:
Mamelombelona tsy tapaka - Raha mamelombelona tsy tapaka ny horonan-tsary ny mpampiasa iray mba hampiakatra ny isa, dia tsy isaina ho fijery fanampiny izany.
Otrik'aretina - malware natao hanimba ny tambajotra, mpizara, na solosaina.
Autoplay - Ny horonan-tsary napetraka ho autoplay amin'ny tranokala rehetra dia tsy ho raisina ho toy ny fijerena.
Hevitra momba ny spam - Raha mamela fanehoan-kevitra momba ny spam ny mpampiasa iray, dia tsy hanisa ny fiambenany ho toy ny fijerena ny YouTube.
Horonan-tsary mipetaka - Raha toa ka mifanipaka ny didim-pitsarana raha raisina ho toy ny fijery mifanipaka ny didim-pitsarana momba ny horonan-tsary tafiditra, dia mety tsy manisa horonan-tsary tafiditra ao anaty pejin-tranonkala iray ny YouTube ary apetraka amin'ny filalaovana mandeha ho azy. Raha toa ka ampahany ihany no andefasana ilay horonan-tsary tafiditra, ka mahatonga ny mpampiasa hamelombelona imbetsaka ilay horonan-tsary, dia tsy ho isaina ihany koa ireo fijery ireo. Ny horonan-tsary tafiditra dia tokony ho feno sy madio, ary ny mpijery dia tokony hanindry an'ilay horonan-tsary ho an'ny YouTube hanisa azy ho toy ny fijerena.
Impiry no havaozina ny fomba fijery?
Na dia tsy navoakan'ny YouTube aza ity fampahalalana ity, fantatry ny YouTubers za-draharaha fa tsy nohavaozina avy hatrany ny fomba fijery. Amin'ny ankapobeny dia havaozina isaky ny 24 ka hatramin'ny 48 ora ny fijerena YouTube.
YouTube Live: Misy dikany ve ireo fomba fijery ireo?
Ny YouTube dia tsy vitan'ny hoe ahafahan'ny olona mampakatra horonantsary voarakitra mialoha fa manana endri-tsary mivantana. Izany dia ahafahan'ny mpampiasa mijery horonantsary mivantana mivantana amin'ny fotoana tena izy. Ny fijerena mivantana dia isaina ho toy ny fijerena YouTube, mitovy amin'ny fijerin'ny horonan-tsary voarakitra mialoha. Tahaka ny amin'ny horonan-tsary voarakitra mialoha, ny isan'ny fijerena horonan-tsary mivantana dia ahitsy rehefa mpampiasa
Havaozy tsy tapaka ny pejy.
Jereo ny video mandritra ny 30 segondra latsaka.
Mampiasà adiresy IP mitovy amin'ny fotoana mitovy amin'ny fitaovana maro.
Sokafy varavarankely samihafa rehefa mijery ny horonan-tsary.
Iza no mila mividy fijerena YouTube?
Ny fividianana fijerena sy mpanaraka YouTube dia afaka manampy anao hahatratra ny tanjonao ho lasa toetran'ny Internet. Ankoatra izany, ny asa isan-karazany dia afaka mahazo tombony amin'ny fividianana fijerena sy mpanaraka YouTube, toy ny:
mozika - Ny horonan-tsary mozika no karazana atiny malaza indrindra amin'ny YouTube. Raha mpitendry mozika te hampiseho ny talentanao manokana amin'izao tontolo izao ianao, dia tsy misy sehatra tsara kokoa noho ny YouTube. Rehefa mandoa ny fijerena ianao dia afaka mampitombo ny fifaneraserana amin'ny horonan-tsaryo ary mahazo fampandrenesana tsara kokoa. Izany dia afaka manokatra fahafahana bebe kokoa ho anao hanitarana ny tanjonao sy hahazoana laza amin'ny Internet.
Manampahaizana manokana momba ny SEO sy mpamorona votoaty - Ny manam-pahaizana momba ny SEO sy ny mpamorona votoaty dia afaka mandray soa amin'ny fomba maro amin'ny fividianana ny fijerin'ny YouTube sy ny fototry ny mpanjifa. Izany dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny paikadin'izy ireo amin'ny votoatiny mba hahazoana laharana ambony kokoa amin'ny Google na YouTube.
Twitch streamers - Ny Twitch dia mifantoka indrindra amin'ny fandefasana horonan-tsary mivantana. Ho an'ireo izay te hahomby amin'ity sehatra ity, ny fampisondrotana ny mpijery ao amin'ny YouTube dia fomba voaporofo hampitomboana ny mpijery organika.
Brands - Mitombo ny isan'ny orinasa sy mpivarotra mampiasa vola amin'ny varotra video izay voaporofo fa mitondra tamberim-bidy be amin'ny fampiasam-bola ara-barotra. Ny horonan-tsary dia fantatra amin'ny fahaizany mampiroborobo ny firotsahana amin'ny mpanjifa, manatsara ny fahatsiarovan'ny marika ary manatsara ny tahan'ny fiovam-po. Raha ny marina, mihoatra ny 70 isan-jaton'ny mpividy no mividy rehefa avy nijery horonantsary momba izany tao amin'ny YouTube. Ireo marika mikasa ny hampitombo ny varotra sy ny firotsahany ho mpanjifa dia hahazo tombony amin'ny fampiasam-bola amin'ny fijerena YouTube.
Ankoatra ireo asa ireo, ny influencers, ny mpandinika ny vokatra, ny mpanao hatsikana, ny matihanina amin'ny fitantanam-bola ary ny mpampianatra dia afaka mampitombo ny orinasany ary manangana fanatrehana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fividianana fijerena YouTube.
Nahoana no zava-dehibe ny fijerena YouTube
Araka ny voalazan'ny Statista, YouTube dia manana mpampiasa 1.86 lavitrisa eran'izao tontolo izao amin'ny 2021. Lahatsary an'arivony tapitrisa ora no jerena isan'andro ataon'ny mpijery amin'ny sokajin-taona rehetra. Mijery horonan-tsary YouTube amin'ny fitaovana maro ny mpijery, ao anatin'izany ny solosaina finday, finday, takelaka, fahitalavitra mifandray, ary birao. Manodidina ny 41 minitra eo ho eo ny fotoana laniny amin'ny YouTube.
Miaraka amin'ny telo ampahefatry ny mponina amerikana mifikitra amin'ny YouTube, ny sehatra no toerana alehan'ny mpivarotra, orinasa ary olona te-hampiseho ny talentany na ho lasa malaza. Araka ny fanadihadiana iray, ny 71 isan-jaton'ny mpivarotra B2B dia mampiasa vola amin'ny famoronana horonan-tsary YouTube hanamafisana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, hahazoana mpanaraka ary hampitombo ny tahan'ny fiovam-po. Maneran-tany, 40 isan-jaton'ny mpanjifa no milaza fa nividy zavatra izy ireo rehefa avy nijery lahatsary momba izany tao amin'ny YouTube.
Ny antony lehibe indrindra hijeren'ny mpijery horonantsary YouTube dia ahitana:
Fanavaozana momba ny vokatra / serivisy vaovao avy amin'ny marika
Na te hampiroborobo ny orinasanao ianao, asehoy amin'izao tontolo izao ny fahaiza-manao sy ny talenta anananao, na te hahazo vola amin'ny YouTube, dia zava-dehibe ny fiantohana ny horonan-tsarinao.
Antony lehibe hividianana fijerena YouTube
Ny metrika fandraisana anjara amin'ny YouTube toy ny fijerena, ny famandrihana ary ny tiana dia maneho ny fomba fifandraisan'ny mpijery amin'ny horonan-tsaryo. Ny fijerena YouTube dia manondro ny isan'ny nijerena ny horonan-tsarinao YouTube. Ny fijerena YouTube dia tondro manan-danja amin'ny lazan'ny lahatsary YouTube anao amin'ny ankapobeny.
Na izany aza, raha jerena fa maherin'ny 500 ora ny votoaty video ampiakarina isa-minitra ao amin'ny YouTube, dia sarotra ny misarika ny sain'ny mpijery.
Ireto misy antony hafa hividianana fijerena YouTube:
Laharana ambony kokoa amin'ny YouTube sy Google – Zava-dehibe ny fijerena mba hanamafisana ny laharan'ny horonan-tsaryo ao amin'ny YouTube sy amin'ny milina fikarohana toa an'i Google. Ny laharana ambony amin'ny pejin'ny fikarohana sy ny YouTube dia manampy amin'ny fanaovana ny horonan-tsary ho hitan'ireo mitady votoaty mitovy.
Ny YouTube dia miasa toa an'i Google. Mikaroka amin'ny teny fototra ny mpampiasa, ary ny valin'ny horonan-tsary dia aseho amin'ny YouTube. Ny algorithm YouTube dia mamaritra hoe iza no horonan-tsary hiseho mifototra amin'ny anton-javatra maro toy ny isan'ny mpanjifa, ny fijery, ny tia, ny fanehoan-kevitra ary ny fizarana. Raha ny tokony ho izy, ny algorithm YouTube dia mitady horonan-tsary mifandraika izay manana fifandraisana ambony indrindra (fijerena, tiana, mpanjifa) mba hahazoana laharana ambony amin'ny valin'ny pejy voalohany. Midika izany fa arakaraka ny isan'ny fijery anananao amin'ny horonan-tsaryo no azo inoana kokoa fa ny horonan-tsarinao dia manana laharana ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana. Ny paikady tsara indrindra hanamafisana ny fomba fijery, indrindra raha vao manomboka ianao, dia ny mandoa vola amin'ny fijerena.
Makà tiany bebe kokoa - Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra ny olona vao manomboka amin'ny YouTube dia mifandraika amin'ny maha-zava-dehibe ny fijerena fa tsy ny tia. Raha miady hevitra ianao raha tokony hividy fomba fijery na ho tia hanamafisana ny lazany sy ny laharam-pahamehana dia mariho fa tsy afaka manana tia tsy misy fijery ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy maintsy mijery ilay horonan-tsary aloha ny mpijery anao vao afaka mitia azy. Ny mpivarotra sy ny YouTubers dia mividy ny fijerin'ny YouTube ho dingana voalohany hahazoana mpanaraka bebe kokoa.
Amboary ny fototry ny mpanjifa - Ny fahazoana olona bebe kokoa hijery ny horonan-tsarinao no fomba tsara indrindra hananganana ny fototry ny mpanjifanao. Arakaraka ny isa ny isan'ny mpanjifa ananan'ny fantsona YouTube anao, ny laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana YouTube.
Ataovy vola ny horonan-tsaryo - YouTubers maro no mahazo fidiram-bola tsara amin'ny alàlan'ny programa YouTube Partnership. Raha te hanatevin-daharana ny fandaharana dia mila manana mpanjifa 1,000 ianao, ary tsy maintsy nijery nandritra ny 4,000 ora ny horonan-tsaryo nandritra ny roa ambin'ny folo volana farany. Rehefa manana ireo fijery sy mpanjifa marobe ireo ny horonan-tsarinao dia azonao atao ny mampiditra fitaovana ao amin'ny YouTube toy ny:
Google AdSense - Google AdSense dia fomba tsotra ahazoana vola amin'ny fametrahana doka amin'ny horonan-tsary YouTube. Ny tambajotran'i Google dia mampifandray ireo orinasa mitady hametraka doka amin'ny fantsona YouTube malaza sy ireo YouTubers mitady vola amin'ny fantsona.
Araka ny tombantombana iray, ny fijerena 20,000 dia afaka manampy anao hahazo $28 hatramin'ny $47 isan'andro. Izany dia midika hoe $460 hatramin'ny $769 isam-bolana ary $5,600 hatramin'ny $9,353 isan-taona.
Varotra varotra - Rehefa mandoa ny fijerena ianao dia afaka ho lasa mpiara-miasa amin'ny YouTube ahafahanao mivarotra entana roa ambin'ny folo amin'ny kaontinao YouTube. Azonao atao ihany koa ny mampiroborobo ny vokatrao manokana amin'ny fantsona YouTube anao.
Marketing marketing - Raha manana fijery be dia be ny fantsona YouTube anao, dia manondro amin'ny orinasa izany fa afaka mitaona ny hafa handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana ianao. Ny orinasa dia mandoa YouTubers malaza mba hampiroborobo ny vokatra.
Ampitomboy ny fomba fijery organika - Ny antony lehibe hividianana ny fijerena YouTube dia ny hampitomboana ny fomba fijery organika, ny tiana ary ny mpanjifa. Raha vao vao manomboka ianao, ny fananana fijery vitsivitsy sy ny mpanjifa dia mety midika fa tsy voamarikao ny horonan-tsaryo. Mitaky fotoana sy ezaka be ny fahazoana olona hijery ny videonao. Ny ankamaroan'ny olona dia mirona hijery horonan-tsary efa niparitaka be na efa nijery an'arivony. Ny fividianana fijerena YouTube dia manampy anao hahazo ny fotoana ilainao hisarihana ny fomba fijery organika, ny tia ary ny mpanjifa.
Hamafiso ny paikadinao YouTube - Raha vao mampitombo ny isan'ny fomba fijery organika ianao dia afaka mampiasa ny metrika hanatsara ny paikadin'ny horonan-tsary YouTube. Amin'ny fanaraha-maso ny fomba fijery dia azonao tsara kokoa raha nandaitra ny thumbnail-nao, maharesy lahatra ny lohateny, ary mendrika hojerena ve ny atiny.
Amboary ny fahatokisana - Aleon'ny olona mijery horonan-tsary izay jerena sy tian'ny maro hafa. Raha tokony hanomboka amin'ny fomba fijery vitsivitsy, dia mora kokoa ny mampitombo ny fijery amin'ny fividianana YouTube. Ny fantsona YouTube malaza dia heverina ho azo itokisana sy azo itokisana. Ny dingana voalohany amin'ny fametrahana fahatokisana dia ny fividianana fijerena YouTube. Rehefa hita ho azo itokisana ny fantsona YouTube-nao dia hahasarika fijery, tia, fanehoan-kevitra ary mpanjifa bebe kokoa.
Amporisiho ny tranokalanao - Ny fahazoana fijery sy mpanjifa bebe kokoa dia fomba tsara hahatonga ny mpihaino anao hatoky anao. Raha mikasa ny hampiasa YouTube hampiroboroboana ny tranokalanao ianao dia afaka manampy anao hahatratra izany tanjona izany ny fividianana fijerena YouTube. Ny fampidirana bokotra CTA (antso ho amin'ny hetsika) mahomby sy rohy ao amin'ny horonan-tsaryo dia hanampy anao hitarika ny mpanjifa amin'ny tranokalanao. Ny fampandehanana ny fizarana media sosialy dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao ihany koa.
Ny fividianana fijerena YouTube amin'ny loharano azo itokisana dia hanampy anao hikendry olona izay mety ho liana amin'ny atiny atolotrao. Ireo olona ireo dia mety hitsidika ny tranokalanao ary hividy ny serivisy na ny vokatrao, hampitombo ny fidiram-bolanao.
Ambonin'ny zava-drehetra, rehefa mividy fijerena YouTube ianao dia afaka manara-maso haingana ny lalanao hahatratrarana ny paikadinao YouTube ho an'ny 2022. Hanafaka ny fotoananao ihany koa izany satria tsy handany fotoana sy ezaka bebe kokoa amin'ny fanangonana mpanjifa bebe kokoa ianao ary hanatsara ny fijerena horonan-tsary. Azonao atao ny manararaotra ny fotoananao malalaka hanitsiana tsara ny paikadinao YouTube, ao anatin'izany ny famoronana votoaty avo lenta, ny fanatsarana ny paikadin'ny varotra amin'ny Internet, ary ny lafiny famoronana hafa.
Ankehitriny rehefa manana hevitra momba ny dikan'ny fijerena YouTube ianao sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fividianana fijerena YouTube, ny dingana manaraka dia ny fitadiavana ny tranokala mety hividianana fijerena YouTube. Miaraka amin'ny tranokala marobe (anisan'izany ireo hosoka) manolotra fijery sy mpanjifa YouTube, dia mety ho sarotra ny mahita tranonkala tena izy.
Ireto ny dingana voaporofo hividianana fijerena YouTube izay mifanaraka amin'ny paikadinao YouTube 2022.
Fomba voaporofo hividianana fijerena YouTube amin'ny 2022
Ny fitadiavana mpivarotra mijery YouTube dia mety handany fotoana sy sarotra rehefa tsy azonao antoka izay tadiavinao. Ny mpamatsy tsara indrindra dia manolotra serivisy kalitao avo lenta, fonosana mora, fanamboarana, fiarovana ny politikam-pamerenana, antoka famenoana ary fanohanana mpanjifa feno.
Ireto ny endri-javatra tsara indrindra hodinihina rehefa mividy fijerena YouTube:
Naoty sy hevitra - Ny zavatra lazain'ny mpanjifa momba ny marika dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Ao amin'ny vanim-potoana nomerika, ny mpanjifa dia mamaky na aiza na aiza manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 11 hevitra alohan'ny hanapa-kevitra ny hifandray amin'ny orinasa iray. Jereo raha manana tsikera sy naoty tsara amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo toy ny Trustpilot ny mpivarotra mijery YouTube.
Trustpilot dia tranokalan'ny fitantanana famerenana mpanjifa azo itokisana izay manasongadina tsikera marina momba ny orinasa avy amin'ny mpanjifa. Mitadiava naoty Trustpilot mihoatra ny 4.5 izay afaka manondro fa azo itokisana ny orinasa. Ohatra, YTPal dia manana naoty 4.7 amin'ny Trustpilot ary heverina ho tranonkala tsara indrindra sy ara-dalàna hividianana fijery, tia, mpanjifa ary maro hafa.
Plans - Tombanana ny mpamatsy fijerena YouTube mifototra amin'ny drafitra sy ny fonosana. Raha vao manomboka manana teti-bola voafetra ianao dia jereo raha manolotra fonosana fanombohana YouTube maimaim-poana ny tranokala, anisan'izany ny fijerena YouTube maimaim-poana sy ny mpanjifa. YTPal dia manolotra fonosana fanombohana maimaim-poana ho an'ny YouTubers izay ahafahanao mahazo mpanjifa folo ao anatin'ny adiny roa ambin'ny folo.
Ny fisafidianana fonosana maimaim-poana dia fomba tsara hitsapana ny kalitaon'ny vokatra sy serivisy atolotry ny tranokala alohan'ny hanolorany azy ireo tanteraka. Rehefa afa-po amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanaterana, ny fandraisana andraikitra ary ny kalitaon'ny serivisy ianao dia afaka mandroso amin'ny fividianana drafitra hafa.
Ny fonosana drafitra karama hafa mahaliana dia manomboka amin'ny $20 isam-bolana. Manana safidy ianao hisafidy fomba fijery 1000 na fijery 100,000 miaraka amin'ireo drafitra karama azo antoka.
Raha tianao ny manontolo fonosana YouTube izay ahitana ny j'aime, ny fizarana, ny mpanjifa ary ny fanehoan-kevitra misy jery, dia tsara indrindra ny misafidy fonosana fijerena. Ohatra, ny fonosana fijerena 1000 dia misy tia 50, fizarana 100 ary fanehoan-kevitra 10. Miaraka amin'ny fonosana fijerena 5000 dia afaka mahazo 400 tia, mizara 2000 ary fanehoan-kevitra 50 ianao.
Ny fividianana fonosana fijerena YouTube dia fomba tsara hitehirizana vola rehefa mahazo ny isan'ny fijerena, tia, fanehoan-kevitra ary fizarana tianao.
Saran'ny serivisy - Rehefa mitady tranokala tsara indrindra hividianana fomba fijery amin'ny 2022, ny antony lehibe tokony hodinihina dia ny manolotra serivisy isan-karazany ny mpamatsy. Na dia mety mila fijerena YouTube aza ianao, manomboka amin'ny, rehefa mandroso ianao dia mila serivisy maro hafa, ao anatin'izany
Fanombanana ny Channel YouTube
Famolavolana sary an-tsary YouTube
Partager sy j'aime.
Azonao atao ihany koa ny manitatra ny fisianao amin'ny media sosialy amin'ny fantsona hafa toy ny Twitter, Instagram, Twitch, na Pinterest. Raha tokony hanatona tranonkala maromaro ho an'ny tsirairay amin'ireo serivisy ireo, dia hevitra marani-tsaina ny misafidy tranonkala iray manolotra ireo tolotra rehetra ireo ao anaty tafo iray.
Tena fijery sy mpanaraka - Ny iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja indrindra tokony hotandremana rehefa mividy fomba fijery mifandraika amin'ny maha-azo itokiana anao. Betsaka ny tranokala manolotra bots sy mpanaraka sandoka na fomba fijery hanamafisana ny antontan'isa YouTube anao. Ny rindrambaiko YouTube anefa dia natao hamantarana sy hamafa ireo mpanaraka sy bots sandoka ireo.
Ny tranokala azo itokisana izay manolotra serivisy avo lenta dia hanolotra tian'ny YouTube, fijery ary fanehoan-kevitra mahazatra avy amin'ny olona tena izy.
Fiarovana sy tsiambaratelo - Ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra hojerena amin'ny tranokala iray mivarotra ny fijerena YouTube dia ny hoe mitazona tsiambaratelo izy ireo. Tombanana ny politikan'ny tsiambaratelon'ny vohikala ao amin'ny tranokalany sy ny fomba fanangonana sy fampiasana ny mombamomba azy manokana. Ny tranokala tsara indrindra dia tsy hangataka ny tenimiafinao raha manaraka ny fomba fanangonana, fanodinana ary fitahirizana angona mety. Tokony hanana fepetra fiarovana henjana ihany koa izy ireo mba hiarovana ny mombamomba anao manokana sy ny angon-drakitra momba ny varotra amin'ny fidirana na fampahafantarana tsy nahazoana alalana.
Ny tranokala dia tokony hilaza ihany koa raha mampiasa sehatra fifandraisana azo antoka SSL izay voarakotra.
antoka famenoana - Ny antoka famenoana dia iray amin'ireo zava-dehibe tokony hotadiavina rehefa mividy fijerena YouTube amin'ny 2022. Zava-dehibe izany satria na dia mahazo ny isan'ny fijerena novidinao aza ianao, dia mety hidina ao amin'ny YouTube ny isa noho ny antony samihafa. Ny mpamatsy fijerena YouTube tena tsara dia hanome antoka famenoana mba hahazoana antoka fa manana ny isan'ny fijerena marina ianao, maimaim-poana.
Hafainganana amin'ny fandefasana - Rehefa mividy fijerena YouTube ianao, dia manantena ny fandefasana haingana ianao, izay manome valiny haingana kokoa ho anao. Ny fisafidianana ny tranokala tsara indrindra hividianana fijerena YouTube amin'ny 2022 dia mila mahafantatra ny fotoana hiverenan'izy ireo amin'ny fandefasana ny fomba fijery. Ny mpamatsy tsara dia hanomboka fanaterana ao anatin'ny 24 ora ary hitohy isan'andro mandra-pahatongan'ny tanjona kendrena. Ny vohikala ambony dia hanolotra fijery mazàna ao anatin'ny roa andro. Raha misy fisalasalana, miresaha amin'ny ekipa mpanohana ny mpanjifa mba hanamafisana ny fotoana hiverenan'ny fijerena YouTube.
Ny tranokala azo itokisana toa ny YTPal dia manome antoka 100 isan-jato ny fandefasana ary antoka famerenam-bola ho fiarovana fanampiny.
traikefa manafatra - Ny traikefa amin'ny fividianana dia manondro ny dingana rehetra ataon'ny mpividy iray, manomboka amin'ny fitsidihana ny tranokala ka hatramin'ny famitana ny fividianana. Ny tranokalan'ny mpivarotra mijery YouTube dia tokony ho mora ny mandeha, tsy mikorontana ary voalamina. Tokony ho afaka mametraka baiko haingana ianao nefa tsy mila manindry rohy maromaro na mila mihaza ny bokotra mividy. Manomboka amin'ny fizotry ny fisoratana anarana tsotra, ny fijerena ny fijerin'ny YouTube dia tokony hojerena, tokony ho manahirana sy haingana ny zava-drehetra.
Customer fanohanana - Ankoatra ny interface tsara manazava tena sy mora ampiasaina, ny tranokalan'ny mpivarotra mijery YouTube dia hanome fanohanana mpanjifa feno. Ity dia mety ahitana fizarana FAQ manokana izay mamaly ny fanontaniana mahazatra indrindra, safidy samihafa hifandraisana amin'ny fikarakarana mpanjifa, toy ny mailaka na ny taratasy fangatahana.
Ny orinasa mandray andraikitra dia matetika miverina aminao ao anatin'ny 24 ora na ao anatin'ny 72 ora.
Refund politika - Toy ny amin'ny fifanakalozana hafa rehetra, ny fividianana fijery avy amin'ny tranokala iray dia mety hitondra risika sasany izay mety ahitana ny tsy fanaterana serivisy na olana momba ny kalitaon'ny vokatra. Ny tranokala tsara indrindra hividianana fijery dia hanana politika famerenam-bola voatonona mazava tsara izay mamaritra ny toe-javatra mety hamerenana ny famerenam-bola sy ny fomba ahafahan'ny mpanjifa mitaky izany.
Raha mikasika ny kalitaon'ny vokatra, ny ankamaroan'ny tranokala dia mitaky anao hanome porofo fa ny serivisy novidina dia tsy araka ny filazalazana ao amin'ny tranokala.
Ankoatra ireo dia mila manamarina ihany koa ianao raha manana politika fanafoanana famandrihana ny tranokala. Manome fahafahana anao hanafoana ny famandrihanao izany rehefa tsy mila mividy fijerena na famandrihana intsony ianao.
Ohatra, manana politikam-pamerenana fanafoanana ny famandrihana YTPals izay ahafahanao manafoana ny famandrihana raha toa ka tsy faly amin'ny vokatra na serivisy ianao. Afaka mahazo tamberim-bidy feno ianao ary manafoana ny famandrihanao amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny fikarakarana mpanjifa ao anatin'ny fito andro amin'ny datin'ny fandoavana ny famandrihana.
Amboary ny paikadinao YouTube amin'ny 2022 miaraka amin'ny fijerena YouTube
Ny famoronana horonan-tsary avo lenta no fanalahidin'ny fisarihana sy fitazonana mpanaraka. Noho ny fahavokarana ambony sy ny fifaninanana henjana ao amin'ny YouTube, sarotra ho an'ireo vao manomboka ny mahazo mpanaraka sy fijery eo amin'ny lampihazo. Izany no antony mahatonga ireo tranonkala izay azonao atao mividy ny fahitana YouTube, tia, ary mpanjifa, dia malaza be. Raha mikasa ny hampitombo ny fisianao YouTube ianao amin'ny taona 2022, araho ny dingana voatanisa etsy ambony mba hisafidianana ny tranokala tsara indrindra hividianana fijerena sy mpanaraka YouTube.
Raha fintinina, ny fomba voaporofo hividianana fijerena YouTube amin'ny 2022 dia ny miantoka ny tolotra ataon'ny mpivarotra:
Serivisy kalitao avo lenta
Fonosana fanombohana maimaim-poana miaraka amin'ny safidy hanatsarana
Serivisy sy drafitra isan-karazany
Fanaterana haingana sy valiny
Antoka miantoka famerenam-bola sy famerenam-bola
Mora, mpampiasa interface tsara ary jereo ny dingana
100 isan-jato fiarovana sy tsiambaratelo
Fijery YouTube avo lenta sy tena izy
Fanohanana mpanjifa 24 x 7
Hevitra sy naoty tsara
Ny tranonkala mpivarotra YouTube tsara indrindra dia manome hery anao hampitombo ny fitomboanao organika amin'ny alàlan'ny fahazoana fijery tena izy, mpanaraka ary tia. Ny fandaozanao ny asa mafy amin'ny fampitomboana ny firotsahana amin'ny mpamatsy fijerena YouTube dia ahafahanao mifantoka amin'ny fitiavanao sy ny atiny.
Ny YouTube Views dia nampiana tamin'ny kalesinao.
Mpanjifa 50 ($ 20) Mpanjifa 100 ($ 30) Mpanjifa 300 ($ 45) Mpanjifa 500 ($ 60) Mpanjifa 1000 ($ 100) Mpanjifa 2000 ($ 180)
Sitraka (100 dolara)Sitraka (200 dolara)Sitraka (300 dolara)Sitraka (600 dolara)Sitraka (1200 dolara)Sitraka (2500 dolara)Sitraka (5000 dolara)Sitraka (10000 dolara)Sitraka (15000 dolara)Sitraka (20000 dolara)Sitraka (30000 dolara)
10 hevitra ($ 20)20 hevitra ($ 35)30 hevitra ($ 50)50 hevitra ($ 80)100 hevitra ($ 140)